Weftigii Maamulka islu Magcaabay Somaliland oo lagu xabadeeyey Adhicadeeye
November 25, 2002. Laascaanood online,Laascaanood,Somalia.
Warbixin ku saabsan go'aamo uu soo saarey M/ C/laahi Yusuf
November 25, 2002. Laascaanood online,Boosaaso,Somalia.
kadib markii cabdullaahi yusuf, ka soo laabtay shirkii Madasha Eldoret ee dib u heshiisiinta somalida, isagoo u sheegay war-baahinta qaarkeed in uu fasax ka soo qaatay muddo dhan 10 cisho, ayaa shir deg deg ah la yeeshay xubnaha Mamulkiisa, waxayna falan qeeyeen amuuro badan oo ay ka soo saareen go'aammo, waxayna kala ahaayeen qodobadasi kuwaan hoos ku qoran:
1. Ugu horreyntii wuxuu maamulkiisa warbixin ka siiyey arrinta shirka eldoret ee dib u heshiisiinta somalida, wuxuuna u sheegay in uu ka qabo rajo wanaagsan in ay halkaa ka soo bixi doonaan maamul soomaaliyeed, oo weliba laga yaabo in hoggaanka sare ee maamulkaas ay ku soo baxaan shakhsiyaad reer p/land ah, laaiin uusan magacaabin.
2. Waxaa kaloo laga hadlay is-haysiga maamulkiisa, waxaana la go'aamiyey in xeer ilaaliyaha maamulkiisa uu go'aan ka soo saaro arrintaa iyada ah, ciddii eeddeeda yeelatana lagu oogo.
3. Arrinta ku saabsan Maxaabiista oo isugu jira Rag maamulkiisa ka tirsanaa iyo kuwa kale, waxaa la go'aamiyey oo la isla oggolaaday in Maxkamad la soo taago oo ciddii denbi yeelata lagu qaado, ciddii kalena la sii daayo, iyadoo aan raggii laga xir xiray maamuliisa xil danbe loo dhiibayn, sida hadalka loo dhigay.
4. Arrimaha Sool iyo Sanaag, waxaa la isku afgartay in halkaa loo diro wafdi maamulka Cabdullaahi yusuf ah, isla markaana deg deg looga hortago in aan Sanadiiq doorasho soo gaarin Gobolladaas, waxaana la qorsheeyey sida ay u badan tahay in uu wafdi uu hoggaamindoono Mr. Axmed Maxamed Xaabsade Xaabsade oo ku magacaaban Wasiirka Arrimaha Gudaha Cabdullaahi yusuf in halkaa loo diro.
5. Arrinta lacagta Faalsada ah, waxaa la isku afgartay in la baadi doono inta maqan lana soo qabto, wixii hadda la hayana Bankiga Bosaso lagu shubo oo lala wareego, waxaa lagu sheegay lacagtaas 31 (soddon iyo kow ) bilyan, waxaase la sheegay in Ismaaciil Garaad waan waan kaga jiro in lacagtaa lagu soo shubo gacanta Maamulka Cabdullaahi yusuf sida ugu dhaqso badan, lana siiyo mushqaayad (commision).
6. Arrinta ku xaabsan Xaaladda deg degga ah, waxaa iyana la go'aamiyey in waqtigeedii dhammaaday oo mas'uulkasta hawshiisa qabsado.
7. Arrinta Dekedda Bosaso, waxaa la go'aamiyey cid aan shati ka wadan wasaaradda Ganacsiga in aanay waxna ka dhoofin karin waxna ka soo rogi karin.
8.Arrinta ku saabsan Garowe, waxaa la go'aamiyey in maamulkiisu dhaqso ugu guuro Garowe, oo ahaan jirtey magaalo madaxdii D/G/p/land oo muddo aan maamul fariisan, waa markii labaad oo maamulka C/laahi Yusuf go'aan ku gaaran in lagu noqfo Garoowe .
9.Arrinta Deegaanka Dhuudo, oo ay ku sugan yihiin Ciidan ka amar qaata maamulka Jaamac Cali Jaamac waxaa maamulka Korneylku go'aamiyey in dagaal lagu qaado goobtaas. Waxaana uu sheegay Cabdullaahi yusuf in dhaqso ku tegayo degmada Qardho, laakiin waxaa laga hor mariyey in si deg deg ah loogu yeeray Cabdullaahi Carays oo ah Taliyaha Daraawiishta Maamulka Cabdullaahi yusuf si uu warbixin ciidan uga keeno halkaas, isagoo Caawa shir gaar ah labada kornayl ay wada yeelanayaan.
dhammaan arrimahan kor ku xusan qaybtood ayaa laga yaabaa in aanay si deg deg ah natiijo looga gaarin.
Bal aan eegno Natiijada arrimaha qaarkood oo si aad ah fiiro gaar ah loo siinayo sida arrinta Dhuudo oo la qorsheeyey in la Weeraro Heshiiskii Xabbad joojinta Eldoret kadib.
Note: Yusuf Musse